Musharixiinta oo soo dhaweeyay xil ka xayuubinta taliyihii NISA | KEYDMEDIA ONLINE
Musharixiinta oo soo dhaweeyay xil ka xayuubinta taliyihii NISA
Inkastoo xubno ka mid ah Midowga Musharixiinta, ayasan wali ka hadlin xaaladaha ku gadaaman kiiska Ikraan Tahliil, hadanaa waxa dhawaan soo baxay war-saxaafadeedkii caadiga ahaa ee Golaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Musharraxiinta, ayaa soo dhaweeyay go’aanka uu Raysalwasaare Maxamad Xuseen Rooble, shaqada kaga joojiyey agaasimahii Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxayna tallaabada RW Xil-gaarsiinta ku tilmaameen mid fure u yahay caddaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la afduubay lana dilay.
Musharixiintu waxa ay dalbadeen, in baaritaan lagu sameeyo taliyihii shaqada laga joojiyey, si caddaalada loo waafajiyo kiisaska uu ku eedeysan yahay Fahad.
Qoraalka ka soo baxay Maxamad C/laahi Farmaajo, waxa ay ku tilmaameen mid lagu carqaladeynayo caddaalad u raadinta qoyska Ikraan Tahliil, lagu qalqal gelinayo amniga dalka iyo kan doorashooyinka.
“Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday wuxuu cadaystay in uu saaxiibkiis kala wayn yahay ilaalinta xuquuqda muwaadinka, dastuurka dalka iyo danta qaranka. Goluhu wuxuu cadaynayaa in Raysalwasaare Rooble uu masuul ka yahay amniga dalka iyo kan doorashooyinka, wuxuuna Goluhu ku garab taagan yahay go'aanka uu cadaaladda ugu raadinayo ehelka Ikraan, kaga dhexsaarayo hoggaanka NISA arrimaha doorashooyinka, kuna soo celinayo sumcadii hay'adda”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay GMM.
Waxa ay ciidanka qalabka sida ugu baaqeen in ay fuliyaan amarka Ra’iisul Wasaaraha, kana fogaadaan ku milanka siyaasadda, kana digtoonaadaan in ay ku kadsoomaan fariimaha Madaxweynaha xilkiisa dhamaaday ee lagu qalqal gelinayo amniga dalka.
“Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, Golaha Wadatashiga Qaran, iyo beesha caalamkaba in ay gacan ku siiyaan Raysalwasaare Rooble sidii uu cadaalad ugu heli lahaa ehelka Ikraan Tahlil, dalkana loogu diyaarin lahaa doorashooyin suurageliya isbedel deg deg ah oo si nabad iyo xasilooni leh ku dhaca.” Ayaa sidoo kale lagu yiri warka musharixiinta.